Madaxweyne Gaas oo Gaalkacyo ku Daah-Furay Sunduuqa Horumarinta Gobolka Mudug – Radio Daljir
Seteembar 9, 2015 7:41 b 0
Arbaco, September 09, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 9-9-2015 magaalada Gaalkacyo ku Daahfuray Sanduukha Horumarinta Gobalka Mudug , oo larabo inuu qeyb weyn ka qaato horumarinta balaaran ee ka soconaya guud ahaan Gobalka.
Xafladda Daahfurka oo ka dhacday Hoolka weyn ee Hotelka uunlaaye ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa lagu casumay oo ka qeyb-galay Gudoomiyaha Baarlamaanka Dawladda Puntland Siciid Xassan Shire , Gudoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mahad Cabdalle , Wasiiro, Xildhibaano, Isimo, Ganacsato, Waxgarad, Haween iyo masuuliyiin kale.
Madasha ayaa lagaga dhawaaqay gudi ka kooban Wasiiro, Ganacsato , Waxgarad iyo bulshada rayidka ah ee Gobalka, kuwaasi oo hogaaminaya sandhuukha horumarinta Gobalka Mudug, waxaana siweyn loo soo dhaweeyey magacaabista gudiga iyo daahfurka sanduukha .
Gudoomiyaha Baarlamaanka Dawladda Puntland Siciid Xassan Shire , Gudoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mahad Cabdalle Cawad, Isimadii iyo ganacsatadii ka qeyb-gashay munaasibadda ayaa si wadajir ah u bogaadiyey daahfurka sanduukhaan iyo hurumarka balaaran ee dhinac kasta ah ee ka soconaya Gobalka Mudug .
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khudbad taariikhi ah dhinacyo badana taabanaysay ka jeediyey munaasibadda ayaa sheegay in Gobalka Mudug yahay Gobal amaan ayna kajirto xasilooni baahsan oo lagu kalsoonaan karo.
Madaxweynaha ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in sanduukhaan horumarineed furanyahay lana rabo in lagu horumariyo guud ahaa Gobalka Mudug, Gobalada kale ee Puntland ayuu sheegay in si lamid ah uu rajeynayo in uga furmaan si looga dhabeeyo baaqii madaxweynaha ee ahaa Puntland ha isku tashato.
Shacabka Gobalka Mudug oo ku dhiiran horumarka soconaya ayaa siweyn u soo dhaweeyey daahfurka Sanduukhaan iyagoona muujiyey inay taageero weyn oo hiil iyo hooba leh lagarab istaagayaan sidii ay u horumarin lahaayeen Gobalka Mudug oo qaadaya dhabada horumarka iyo Nabad-gelyada .
DHAGAYSO: Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo Wariye Toll-Man